လှို့ဝှက်သတင်း နှင့် အကြံအစည် ပေါက်ကြားမှုများ – နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်အာဏာလုယူမှုကြီး (၂၀၂၁) – Civilised Forums of Myanmar Community
[Sticky] လှို့ဝှက်သတင်း နှင့် အကြံအစည် ပေါက်ကြားမှုများ
Topic starter 13/02/2021 2:16 pm
အာဏာသိမ်း မြန်မာ စစ်တပ်နှင့် စစ်တပ်ကို ထောက်ခံသည့် အဖွဲ့အစည်း လူပုဂ္ဂိုလ်များမှ လှို့ဝှက်ကြံစည် တန်ပြန်လှုပ်ရှားမှုများ အပါအဝင် သူတို့၏ လှို့ဝှက် ဆောင်ရွက်ချက် သတင်းပေါက်ကြား သိရသည်များကို ဤအကြောင်းအရာ ခေါင်းစဥ်အောက်တွင် Reply လုပ်၍ထည့်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။
(ဤနေရာ အောက်တွင် ထည့်သွင်းသည့် အချက်အလက်များမှာ အမှန်မဟုတ်ကြောင်း သိရလျှင် ချက်ခြင်း Site Admin သို့ အကြောင်းကြား Report လုပ်ပေးပါရန်)
ပျဥ်းမနား ကြံ့ဖွတ်မှ အခကြေးငွေ ပေး၍ လူဌားကာ - တပ်မတော် ထောက်ခံပွဲ လုပ်ဖို့ ငွေပေးစည်းရုံးနေသည့် အစည်းအ‌ဝေး မှတ်တမ်း ဗွီဒီယို ဖြစ်ပါတယ်...၊
13/02/2021 2:18 pm
ကယားပြည်နယ်မှ ပြည်သူများနဲ့ ပူးပေါင်းလာသည့် ပြည်သူ့ရဲများကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အစစ်များ မဟုတ်ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်၊ True Story ရဲ့ YouTube Channel မှာ ထိုရဲများဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အစစ်များ ဖြစ်ကြောင်း သိသာ ထင်ရှားတဲ့ ဗွီဒီယိုကို အောက်ပါ Link မှာ ကြည့်နိုင်ပါမယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အစစ်တွေကို အတုတွေ ဆိုပြီး တန်ပြန်သတင်း ဖြန့်ဝေဖို့ ပေါက်ကြားလာတဲ့ စာကိုလဲ Facebook ကနေ ရရှိလို့ ပြန်ဝေဌလိုက်ပါတယ်။
14/02/2021 10:31 pm
ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတစ်ခုကို ပြောရဉီးမယ်။ ဒီနေ့ နေ့လယ် (၂)နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော့်ဆီကို ဖုန်းတစ်ကောလ် ဝင်လာတယ်။ ဆက်တဲ့သူက ကျွန်တော်နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဉီး ပါ။
သူနဲ့ကျွန်တော်သိတာ (၅)နှစ်ရှိပါပြီ။ သူ့သမီးကို စာသင်ပေးဖူးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်နဲ့ တော်တော်လေးရင်းနှီးသွားတာပါ။
လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေး၊ ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရ ပြန်လည်အာဏာရရှိရေး၊ မြန်မာပြည် စစ်ကျွန်ဘဝမှအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ရေး တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုန်းဆက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်(၃)ခုအပေါ် အခုလိုပဲ ဝေဖန်သုံးသပ်ပြသွားပါတယ်-
(၁) Civil Disobedience Movement (CDM) အောင်မြင်မှု အခြေအနေ
ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ counter attack ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆိုပါတယ်။ အာဏာသိမ်းလိုက်ရင် ဆူပူအုံကြွမှု၊ လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြမှု နဲ့ နိုင်ငံတကာက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို အာဏာသိမ်းအစိုးရအနေနဲ့ မျှော်လင့်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် CDM နဲ့ အခုလိုမျိုး ဆန့်ကျင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
CDM အောင်မြင်လား မအောင်မြင်လားဆိုရင် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေ ခေါင်းခြောက်နေရတဲ့အကြောင်း၊ ချော့လို့လည်းမရ ခြောက်လို့လည်းမရတဲ့အခြေအနေ ဖြစ်နေကြောင်း၊ အခုဆိုရင် ဘယ်လောက်အထိ ယုတ်မာဖို့ကြံနေကြသလဲဆိုတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေနဲ့ တပ်ထဲကလူတွေကို CDM ဝန်ထမ်းတွေနေရာအစားထိုးဖို့ ပြင်ဆင်နေကြကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ယန္တရားလည်ပတ်ဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း(ဆရာဝန်၊ သူနာပြုတွေ)၊ ပညာရေးဝန်ထမ်း၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်း၊ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေက စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ CDM လုပ်နေကြတော့ သူတို့အကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်နေကြကြောင်း သိရပါတယ်။
နေအိမ်တိုက်ခန်း ဖယ်ပေးရမှာ၊ ဌာနဆိုင်ရာအရေးယူခံရမှာ၊ အလုပ်ပြုတ်မှာတောင် မကြောက်ကြတော့တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို နောက်ဆုံးခြောက်လှန့်တဲ့အနေနဲ့ ထောင်ချအရေးယူမယ်၊ ရဲနဲ့ဖမ်းခိုင်းမယ်ဆိုပြီး သတင်းလွှင့်ထားတဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ အမှန်တကယ်ကြောက်လန့်အောင် တစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စ အဖမ်းပြတဲ့အကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ အင်မတန်ထိရောက်လို့ အခု CDM ဝန်ထမ်းတွေတောင် သွေးပျက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။
သူအကြံပြုတာကတော့ ကိုယ့်လူတွေကို သေချာနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့၊ စည်းစည်းလုံးလုံး နေထိုင်ကြဖို့၊ အသွားအလာ ဆင်ခြင်ဖို့နဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မာဖို့လိုကြောင်း ပြောသွားပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် လမကုန်ခင် ယန္တရားတစ်ခုလုံးရပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း သုံးသပ်ပြသွားပါတယ်။
(၂) လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမှု အခြေအနေ
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်း သွေးအေးသွားပြီး တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ဆန္ဒပြသူအရေအတွက် နည်းလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် အထင်နဲ့အမြင် တက်တက်စင်အောင် လွဲသွားကြောင်း ပြောပါတယ်။
လူတွေရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရ ပြုတ်မကျမချင်း ဆန္ဒပြနေမယ့် ယုံကြည်ချက်တွေကို တွေ့ရကြောင်းလည်း သူက ဆိုပါတယ်။
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ CDM လုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အစွမ်းကုန်ထောက်ပံ့ပေးနေပြီး၊ ဆန္ဒပြတာကိုလည်း စနစ်တကျဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက် အာဏာရှင်တွေ အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်နေကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။
ယခု တပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ မျက်နှာကို သေချာကြည့်ရင် သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် တဲ့ ။
ဘယ်သူတေတေ ငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့ တရုတ်၊ မိတ်ဖက်ယူထားတဲ့ ရရှားတို့လို အင်အားကြီး (၂) နိုင်ငံကလွဲရင် တခြား ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေက အမှုန့်ကြိတ်ချင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခင်လည်း ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်လာတော့မှာမို့ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာ ဘေးကျပ်နံကြပ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
လုပ်ငန်းစဉ်(၃)ခုအပေါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ပြသွားတာကတော့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက် အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူက ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတစ်ယောက်ပါ။ တပ်ကပြောင်းလာတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ယောက်။ ဒီသတင်းတွေကို ကျွန်တော့်အပေါ် ယုံကြည်ပြီး ပြည်သူအပေါ်လည်းစေတနာမှန်တဲ့အတွက် ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်က ပြည်သူတွေသိအောင် စာပြန်ရေးပါရစေလို့ ခွင့်တောင်းတော့ အသာတကြည်ခွင့်ပြုပါတယ်။ လူမှုရေးကျင့်ဝတ်အရနဲ့ သူ့လုံခြုံရေးအတွက် ဌာနအမည်ထည့်မရေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး(၃)ခုဟာ အောင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဆက်လက်အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ကောက်ရိုးမီး မဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း သတိပြုဆင်ခြင်ရမှာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက -
(၁) ထောင်သားတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်တာဟာ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင်၊ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖန်တီးနိုင်အောင်၊ နေ့ဘက်ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကို ညဘက်မှာဒုက္ခပေးပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ အားအင်ယုတ်လျော့အောင် ဆောင်ရွက်တာဖြစ်လို့ အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင် သတိထားရမှာဖြစ်ပြီး၊ တကယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့ရင် စစ်တပ်ဝင်လာမှာဖြစ်သလို အာဏာရှင်အကြိုက်ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈ တုန်းကလို တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျဖို့ လက်နှစ်လုံးအလိုမှာ ကယ်တင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကွက်တွေ မခင်းနိုင်အောင် ဂရုပြုရပါမယ်။
(၂) ဘယ်လိုမျိုးခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ရှိနေပါစေ CDM ကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဆက်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ CDM လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေ/ CDM လုပ်ဖို့ ဉီးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ညဘက်တွေဝင်ဖမ်းတယ်၊ ဖမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး(mind game) လုပ်တာသာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ psywar ဟာ CDM အောင်မြင်ရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာမို့ အလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ သတင်းအမှားဖြန့်ခြင်းတွေ မပြုလုပ်မိပါစေနဲ့။
(၃) အချင်းချင်း ယုံကြည်ဖို့၊ စည်းလုံးဖို့၊ ဖေးမကူညီဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မယုံကြည်တဲ့အခါ မစည်းလုံးတော့ပါဘူး။ စည်းစနစ်မကျတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ ဘာလုပ်လုပ်မအောင်မြင်ပါဘူး။ အဲဒီ့တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု (mutual trust)၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှု(mutual respect) တွေ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘုံရည်မှန်းချက်ဟာ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေး၊ ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရ ပြန်လည်အာဏာရရှိရေး၊ မြန်မာပြည် စစ်ကျွန်ဘဝမှအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ရေး သာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီးဖို့၊ နာမည်ကောင်းရဖို့အတွက် မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ သဘောထားကြီးဖို့ လိုအပ်သလို၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ဖို့လည်း အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သွေးစည်းရင် ဒီအာဏာရှင်တွေကို မလွဲမသွေ အနိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ဝန်ထမ်းတွေဘက်က CDM ကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ ဆက်လုပ်သွားဖို့ အရေးကြီးသလို၊ ပြည်သူတွေဘက်ကလည်း CDM ဝန်ထမ်းတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့နဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်း ဇွဲရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အခုအချိန်ထိ အင်မတန်အားရစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာလည်း တစ်ရက်ထဲမဟုတ်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ကြဖို့ရယ်၊ အင်အားအလွန်အမင်း မသုံးစွဲဖို့ရယ် သတိပေးလိုပါတယ်။
(၅) သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေတဲ့အခါ အရေးကြီးရင်ကြီးသလို လျင်မြန်မှုကို ဉီးစားပေးသင့်တာမှန်ပါတယ်။ သို့သော် တချို့သတင်းတွေက တိကျမှန်ကန်မှုကို ဉီးစားပေးရမှာတွေရှိပါတယ်။ သတင်းအမှားပေးရင် သတင်းရတဲ့သူ ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ တွေ့သမျှမြင်သမျှ မရှယ်ပါနဲ့။ ကော်ပီမကူးပါနဲ့။ မဖြန့်ပါနဲ့။ ဖတ်ပြီး၊ သေချာစဉ်းစားပြီးမှာသာ ဖြန့်ဝေပေးစေလိုပါတယ်။ ဒါဟာ အပြစ်ပြောတာ မဟုတ်ပါ။
အခုဆိုရင် CDM ဝန်ထမ်းတွေ/ CDM ဉီးဆောင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းနေပြီဆိုတဲ့ သတင်းဟာ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ အတွင်းသတင်းဆိုပြီး ထွက်လာပါတယ်။ အတွင်းသတင်းဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ အပြင်ကို ပေါက်ကြားလာရသလဲ သေချာစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။
ဉပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် လူမှုဖူလုံရေးက CDM မှာပါဝင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို စာရင်းနဲ့တကွ လိုက်ဖမ်းနေပြီဆိုပြီး Psywar လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ဌာနက ညီတွေ၊ ညီမတွေက ကျွန်တော့်ဆီကို ဖုန်းဆက်ကြပါတယ်။ သူတို့ ဘေးကင်းတဲ့အကြောင်း။ သတင်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်းကိုပါ။
ဒါပေမယ့် အပြင်မှာ သတင်းအစစ်ထင်နေပြီး တချို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေက ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။
(၆) ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေ၊ ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ့်သူတွေဟာ သူများတွေထက် ပိုပြီး သဘောထားကြီးရပါမယ်။ ဉီးနှောက်သုံးရပါမယ်။ အဝေဖန်လည်း ခံနိုင်ရပါမယ်။လိမ္မာပါးနပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လူတိုင်းကြောက်တတ်ကြတာမှန်ပေမယ့် အလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့မနေသင့်ပါ။ ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ့တဲ့ ရာထူးစည်းစိမ်တွေကိုရွေးပြီး ပြည်သူအပေါ် သစ္စာဖောက်မလား ? အလုပ်ပြုတ်ခံ၊ ထောင်အကျခံပြီး ပြည်သူအပေါ် သစ္စာရှိမလား? ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့လျှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
(၇) ပြည်သူတွေက ညီပြီးသားမို့ စိတ်ပူစရာမရှိပါ။ သို့သော် တစ်ခုပဲ စိတ်ပူတာက လူယုတ်မာတွေဆင်တဲ့ခွင်ထဲ မဝင်မိကြစေဖို့ပါ။ သူတို့က ထောင်သားတွေလွှတ်ပြီး တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်၊ ဆူပူအုံကြွအောင် ယုတ်မာတဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီး ကြိုးပမ်းလာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကပြန်ပြီး အကြမ်းမဖက်မိဖို့ အထူးဂရုစိုက်ကြပါ။ သတိဝီရိယရှိကြပါ။
အခုဆိုရင် CDM လည်း အားကောင်းနေပြီ။ ပြည်သူကလည်း စည်းလုံးညီညာနေပြီ။ အင်မတန်လိမ္မာပါးနပ်ပြီး ရဲရင့်တဲ့ Generation Z (Gen Z) ရှိနေပြီ။ နိုင်ငံတကာကလည်း ဖိအားတွေပေးပြီး အရေးယူတော့မယ်။
အာဏာရူးစစ်ခေါင်းဆောင်ကိုလည်း လက်အောက်ငယ်သားတွေက စိတ်ပျက်လာပြီ။
အာဏာရူးနဲ့ ပြည်သူ့ဘက်တော်သား စစ်သားစစ်စစ်တွေ အားပြိုင်လာပြီ။ တပ်ပျက်လာပြီ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ မကြာခင်ပြည့်ဝတော့မှာပါ။
21/02/2021 1:32 am
ဘုန်းကြီးအတု ယောင်ဆောင်ပြီး သူပုန်စစ်တပ်ကို ကြံ့ဖွတ်ဘက်မှ အခကြေးငွေဖြင့် ပူးပေါင်းနေသည့် အထောက်အထား ဓါတ်ပုံများ - (မြန်မာ့ အသိုင်းအဝိုင်း ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာများမှ ကူးယူ ဖြန့်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်)
၅ ထောင်စားများ ဆန္ဒပြပွဲတွင်းမှ ပြုတ်ကျ ကျန်ခဲ့သော နေ့စား စာရင်းစာအုပ် Facebook ပေါ်မှ ရရှိသဖြင့် ပြန်လည် ဖြန့်ဝေသည်။
ယနေ့ တပ်မတော် ဆန္ဒပြပွဲ ပါသူတဦးမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တယောက်ဖြစ်ကြောင်း Facebook ပေါ်မှာ ယှဥ်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ
22/03/2021 11:13 pm
အကြမ်းဖက် စစ်ဓါးပြများမှ ဘဏ်အပ်နှံသည့်ပစ္စည်းများအား လုယက်ခိုးယူရန် ကြံစည်မှု အစီအစဥ်ပေါက်ကြား